Home News RW Kheyre oo Shirkii Golaha Wasiiradda maanta ka soo saaray go’aano u...
RW Kheyre oo Shirkii Golaha Wasiiradda maanta ka soo saaray go’aano u muuqda in ay ka soo horjeedaan talaabadii MW Farmaajo
Shirkii Golaha Wasiiraadda maanta ayaa laga soo saaray qaraar u muuqda in uu ka hor imaanayo go’aankii uu qaatay MW Farmaajo oo lagu nabadeeynay magaalada Muqadishu. Golaha Wasiiradda ayaa soo saaray go’aan sheegaya in dhamaan ciidamada sugaya amaanka magaalada Muqadishu in ay hoos imaan doonaan ciidanka Booliska. Inakstaa horay looga codsaday RW Kheyre inuu hoos keeno ciidaan beeleedkii Xalisnlta ciidanka Booliska, lakaiin uu diiday ayaa hada u muuqada in uu go’aankaas qaatay. Hadaba su’aasha iswaydiinta leh ayaa ah maxaa keenay in uu badalo go’aankisii hore. Ma laga yabaa in uu doonayo in uu ku dhabar jabiyo talabadii MW Farmaajo dhawaan qaaday.
halkaan ka aqriso qoraalkii golaha wasiiradda soo saaray maanta
Previous articleSharif Xassan oo beri ugu baaqay Xildhibaanada K. Galbeed ee Federaalka shir deg deg ah
Next articleDowladda Sucuudiga oo ugu danbeyn ogolaatay shirkadahii dowladda federaalka ay wadatay